SimplySign - nhare elektroniki Signature - inokurumidza uye yakachengeteka
SimplySign inoshanda sei?
Ibhizinesi rako kuti riite nekukurumidza uye rakachengeteka
Zvakareruka, zviri nyore uye zvehupfumi
nhare yemagetsi siginecha
Chishandiso chazvino chekushandisa
maminetsi ese anotarisirwa
SimplySign ichachinja yako smartphone kuti ive yemazuva ano basa chishandiso, nekuda kwekuti iwe unogona nekukurumidza uye nyore nyore kusaina ese e-magwaro sekunge iwe uri kusaina ivo pachavo. Iyi ndiyo yekutanga sevhisi yemhando iyi yakapihwa pamusika wePoland
Inoshanda paSmartphone / Tablet / PC
Inoshanda isina kadhi yemuviri
Inoshanda pamapuratifomu akawanda Windows / macOS / Android / iOS
Inopindirana neklass eP Signature
Yakasimba mutengi kusimbiswa
Iko kugona kwekubatanidza kushandisa API
inozivikanwa pakarepo muAdobe software pasi rese!
Yakagadzirirwa kushandira pamwe nehofisi uye nemasisitimu ekutonga
Tsigiro yezvakakosha zvemusika zvinoshandiswa: (eg. Payer / e-Declarations chirongwa)
YAKABVUNZWA KUTI / ZVINODA ZVAKO
Chero mudziyo usina muverengi uye kadhi
Yako yakasarudzika, yakavanzika siginecha
haana kumbochengeteka zvakadaro
SimplySign ichachinja yako smartphone kuita chazvino basa chishandiso. Mutsva - siginecha inoshanda inoshanda isina kadhi yemuviri uye muverengi, zvese pamahedhifoni emakomputa nemakomputa ekirasi.
Inoshanda zvinoenderana nebasa rakakosha
Gwaro reS SimplySign rinogona kushandiswa nevanopa mubairo weZUS kusaina zvirevo, kutumira e-Zvitaurwa kana JPK yakaendeswa kuZUS, kana ichigumisa zvibvumirano zvemitemo yehurumende, kusaina mainvoice emagetsi.
Iko mukana wekubatanidzwa uchishandisa API
Kubatanidza uchishandisa API, nekuda kwaunokwanisa kubatanidza yako yega IT system munzvimbo yekusayina magwaro ane anokwanisa siginicha yemagetsi - kusaina uine kamwechete kopi. (API- Chikumbiro Programming Interface inobvumira mafomu kutaura nevamwe.)
Yakasimba 2-chinhu kusimbiswa
2-factor certification inoreva kushandisa password yezvaunoziva uye yechipiri chikamu chezvinhu zvaunofanira kupinda mukati. Mushandisi anotumira nekupinda password, ichiteverwa neyakaganhurirwa tambo yenhamba yakagadzirwa kune yakatarwa zuva nenguva. Mutengi akaiswa mukati kana password uye tambo dhi.
Kutumira magwaro kuburikidza neInternet kuri kudhura zvakanyanya, kwakanakira uye kunochengetedza nguva yako.Hapachina kudhinda, kuzadza bhuku uye kusaina magwaro. Iwo magwaro anoendeswa zvakachengetedzeka uye iwe unongozvitambira semutemo ziviso yekugamuchira.
Kushandisa e-masevhisi inzira yakatsanangurwa yekuvandudza mashandiro ekambani. Rondedzero yemabasa uye zvigadzirwa zvinogona kugadziriswa kuburikidza neInternet zviri kuramba zvichikura. Kuisa chisimbiso, kufukidza, kutumira pamwe chete nemari yayo kuchakanganwika.
Iwo magwaro anoendeswa zvakachengetedzeka uye iwe unongozvitambira semutemo ziviso yekugamuchira. zvinyorwa zvine e-siginecha zvine simba rakaenzana rezvemitemo sekunge rakasainwa neruoko. 128-256 bit data kunyorera kunodzivirira iwe pamwe nevatengi vako kubva pakubata kwedata.
Matanho masere kuti ubudirire
Kuisa chisimbiso, kufukidza, kutumira pamwe chete nemari yayo kuchakanganwika
Iyo internet inounza zvakanyanya makondinendi pamwe chete, uye e-siginecha inokutendera iwe kupedzisa mapurojekiti akakosha pasina kusiya hofisi yako.
Ingoshandisa siginicha yemagetsi kugadzirisa nyaya yacho yese mumaminetsi mashoma!
Inochengetedza nguva yako. Kudhinda, kuzadza manyorerwo uye kusaina kwemagwaro zvakarongeka.
Unhu hwepamusoro hwezvitupa zvese zvakapihwa hunovimbiswa.
Inobvumikisa kutendeka kwakazara. Iwo masevhisi anopiwa anoenderana neyakajairwa pasi rose.
Setifiketi ichaona kuchengetedzwa kwezvinhu zvako kambani uye mufananidzo. Izvi zvinogonesa chikamu chakakwirira chekuvimba
Iwo magwaro anoendeswa zvakachengetedzeka uye iwe unongozvitambira segwaro retifiketi rekuti watambira.
Chitupa chakakodzera chakabatanidzwa muSimlySign sevhisi (inoshanda: makore 1 kana 2) inoshanda zvinoenderana nebasa rese rakakosha pamusika, saka inogona kushandiswa:
nevari kupa ZUS vanobhadhara kusaina kuzivisa
yekutumira e-Declaration kana JPK inotumirwa kuHofisi yeMutero
pamhedziso iri kure yemasangano emutemo wehurumende
kusaina invoice zvemagetsi
kuendesa mafomu kuNational National Appeal Chamber (National Chamber of Appeal)
kuendesa zvirevo mumatare ekuyeuchidza mafambiro
kuendesa mafomu uye kuwana ezvinyorwa kuNational Court Registr
kunyorerana pasi neGIODO (General Inspector Yekuzvidzivirira KweData)
kuendesa e-kuzivisa kuUFG (Inishuwarenzi Guarantee Fund)
kunyorerana mahofisi evashandi vehurumende
kupedzisa mutemo wehurumende zvibvumirano zvemagetsi
kutora chikamu mumagetsi emagetsi uye mahenda
kutaurirana mukati mePUAP papuratifomu (Magetsi enhare yePublic Administration Services)
Iyi ndiyo yekutanga sevhisi yemhando iyi yakapihwa pamusika wePoland, uyo:
Inoshanda isina kadhi yemuviri uye muverengi,
Inobvumira kusaina e-Zvinyorwa online online / 24 chero nguva, kubva chero kupi zvako pasi,
Inoshanda pane zvese nharembozha (Android uye iOS) uye macomputer emhando (PC, Mac OS),
Iyo inovimbisa kuchengetedzwa kwekushanda kwepamhepo (eIDAS kutevedza, 2-chinhu chokwadi)
Chikwangwani chakakodzera inzira yakabvumidzwa yekuvandudza bhizinesi rako. Iyo yemagetsi siginecha ikozvino rave bhizinesi rezuva nezuva.
(Ndokumbirawo kuronga zuva remusangano nerunhare)
GCB hofisi yekuvaka
Yakatenderwa Certum Partner
IBS Poland sp. Z o O
Isu tinoshandisa makuki pane webhusaiti yedu kukupa iwe chaiyo yakakodzera chiitiko nekurangarira zvaunoda uye kudzokorora kushanya. Nekudzvanya "Gamuchira", unobvuma kushandiswa kwema cookies ese.
Webhusaiti yedu kero ndeye: https://mobilesignature.eu.
Kuti tikwanise kukupai zviri nani uye zvirinani zvekudzidzisa zvishandiso uye kukupai zvirinani uye zviri nani masevhisi, tinoda mvumo yekuvandudza kushambadzira zvemukati zvemukati kune zvaunoda.
Isu tine hanya nezve zvakavanzika zvako. Yako data yakachengeteka nesu uye unogona kubvisa kubvuma kwako chero nguva.
ZVEKUZIVA PENYAYA YAKO
Ndokumbirawo kuti muverenge zvinotevera ruzivo:
Musi waMay 25, 2018, Regulation (EU) 2016/679 yeParamende yeEuropean uye yeDare raKubvumbi 27, 2016 pane kuchengetedzwa kwevanhu maererano nekugadziriswa kwemashoko ako pachako uye pane kusununguka kwekufambisa kwedata rakadai, uye kudzokorora 95/46 / EC (RODO, ORODO, GDPR kana General Dziviriro Dzvidziro
Kuti uenderere mberi nekukupa iwe masevhisi kuburikidza newebhusaiti https://mobilesignature.eu/ tinoda kukuzivisa iwe nezvekugadziriswa kwedata uye nemirairo iyo pazvichaitwa mushure meMay 25, 2018.
Ndezvipi data zvatinoita?
Dhata yakaunganidzwa uchishandisa webhusaiti yedu https://mobilesignature.eu/ , kusanganisira yakachengetedzwa mumakuki.
Zvinyorwa zviri pane ino saiti zvinogona kuve nezvakadzikwa zvemukati (semuenzaniso, mavhidhiyo, mifananidzo, zvinyorwa, nezvimwewo). Yakasungirirwa zvemukati kubva kune mamwe mawebhusaiti inoita nenzira yakafanana sekunge mushandisi akashanyira imwe webhusaiti zvakananga.
Yakasungirirwa zvemukati kubva kune mamwe mawebhusaiti
Nzvimbo dzinogona kuunganidza ruzivo nezvewe, shandisa makuki, kubatanidza mamwe maitiro ekunze ekutevera, uye kutarisisa kushambadzira kwako nezvinhu zvakadzimbirwa, kusanganisira kuronda kubatana kwako nezvinhu zvakabatanidzwa kana uine account uye wakapinda panzvimbo iyoyo.
Ndiani maneja weData rako?
Mutariri wedatha yako IBS Poland Sp. Z o .. O. Ine dzimbahwe muGdynia (81-350) kuPac Kaszubski 8/311, yakapinda muRejista yeVamabhizinesi pasi peKRS nhamba 0000471089, iyo mafaera ekunyoresa ayo anochengetwa neDare reDare Gdańsk-Północ | VII Dhipatimendi Rezvekutengesa reNational Court Nyore, NIP 586-228-41-33 ine share capital - yakabhadharwa-up: PLN 50.
Nechinangwa chei chatinoda kugadzirisa data rako?
-Isu tinogadzirisa izvo zvinoratidzwa pane mapeji edu kune izvo zvinodiwa zvega uye tinogara tichivandudza kunaka kwemasevhisi anopihwa, tichishandisa kuongororwa kwedata rako,
- Kugadziriswa kwedata kunotigonesa kuwedzera kuchengetedzwa kwemasevhisi anopihwa kuburikidza newebsite iyi https://mobilesignature.eu/
Kusvika riini tichagadzirisa data?
Isu tinogadzirisa dhata kubva panguva yekupa mvumo yakakodzera kusvika pakubviswa kwayo kana kukumbira kumira kuti isaronge data rako pachako / ndokumbira kubviswa kwewekugadziriswa kwedata nemuridzi. Isu tinogadzira dhata yakaunganidzwa sechikamu chekunyora kubva panguva yaunotanga kushandisa webhusaiti https://mobilesignature.eu/, i.e. paunopinda webhusaiti yedu, kusvikira iwe uchiramba ku profiling.
Tinogona kuendesa data?
Iyo webhusaiti https://mobilesignature.eu/ inoendesa data chete kuzvinhu zvinogadziriswa pachinzvimbo chazvo (semuenzaniso, makambani ekuronga, uye masangano anotenderwa kuzviwana pasi pemutemo unoshanda, sematare.Data rako harizoendeswa kunze kwenzvimbo yeEuropean hupfumi uye harizogoverwe. masangano epasi rese.
Ndiani iwe waunogona kubata kuti uwane rumwe ruzivo nezve data yakagadziriswa?
Kana iwe uine chero mibvunzo nezve chako data, tapota nyorera kune yedu Yega data Inspector biuro@ibs-24.eu nerunyorwa "GDPR"
Iyo RODO fomu tag ichave yakawedzera yakawedzerwa kune yega yega fomu inoshanda (semuenzaniso mafomu ekutaurirana, mhinduro),
- Nekushandisa fomu, unobvumidza kuchengetwa uye kugadzirisa data rako nesaiti.
-Iyo webhusaiti inodzidzisa
Ndeapi kodzero dzako maererano nedata rako?
- Une kodzero yekuwana data rako uye nekodhi yekugadzirisa, kudzima, kudzikamisa mashandiro, iyo kodzero yekuendesa data, iyo kodzero yekurambidza, kodzero yekubvisa mvumo chero nguva pasina kukanganisa mutemo wepamutemo wekugadzirisa maererano nekutendera usati wabviswa. . Mvumo inogona kubviswa nekutumira e-mail kukero biuro@ibs-24.eu kubva kukero kune iyo chibvumirano ichienderana
- iwe zvakare une kodzero yekuisa chinyunyuto neGIODO kana iwe ukaona kuti kugadziriswa kwe data rako pachako kunotyora zviga zvemitemo yakajairwa pane kudzivirirwa kwega data romusi wa 27 Kubvumbi 2016.
Ndeapi matanho epamutemo ekugadzirisa ako data?
- https://mobilesignature.eu/ inofambisa dhata yako pane zviri pamutemo zvichienderana nemirairo inoshanda
- Iyo yepamutemo hwaro hwehuwandu hwekuyerwa uye neyako kushambadzira ndiyo inonzi Iko kunakirwa kufarira kwemutariri pasi peArt. 6 sec. 1 t. F GDPR,
Iyo webhusaiti inoshandisa makuki, i.e. mameseji faira akachengetwa pane Mushandisi komputa. Zvinodzora pakushandisa makuki zvinogona kukanganisa zvimwe zviitiko zvinowanikwa pawebsite.
Makuki anodiwa akakosha zvakakwana kuti webhusaiti ishandise nemazvo. Cheki makuki chete ayo anovimbisa mabasa ekutanga uye chengetedzo ye webhusaiti zvinosanganisirwa muchikamu ichi. Aya makuki haachengete chero ruzivo rwevanhu.
Chero makuki asina kukodzera kuti webhusaiti ishandise uye anoshandiswa chaizvo kuunganidza wega mushandisi data kuburikidza neanoongorora, kushambadza, zvimwe zvakabatanidzwa zvemukati zvinonzi zvisina kukosha makuki. Iko kunofanirwa kuwana mvumo yemushandisi usati wamhanya makuki aya kuwebhusaiti yako.
Chengetedza uye gamuchira